कसरी एक प्रेमको भरोसा पुनर्स्थापना गर्ने?
जीवनमा, त्यस्ता परिस्थितिहरू छन् जसमा व्यक्तिले गल्ती गर्न सक्छ, जुन पछि पश्चात्ताप पछ्याउँछ। यदि यो तपाईंसँग भयो भने, तपाईं शायद एक मायालु एक भरोसा कसरी पुनर्स्थापना गर्ने बारे सोच्दै हुनुहुन्छ। यस अवस्थामा ध्यान दिन योग्य मुख्य कुरा भनेको यो स्थिति चाँडै सुचारु गर्न सम्भव छैन। सम्बन्धमा लामो कामको लागि ट्युन गर्नुहोस्।
रिश्तेमा हराएको विश्वास कसरी प्राप्त गर्ने?
धेरै भरोसाको क्षतिको कारणमा निर्भर गर्दछ। यदि तपाईं झूटा बोल्नुभयो र तपाईंको झूटो हटाइयो - यो एक कुरा हो। यदि तपाइँ कुनै पनि परिस्थितिमा बदसूरत व्यवहार गर्नुभयो भने - यो फरक छ। र स्थितिमा विश्वास विशेष गरी खराब छ, यदि तपाई परिवर्तन भएमा, वा तपाईं अर्को व्यक्तिको साथ प्रेममा बिर्सनुभयो।
प्रत्येक व्यक्तिले तनावपूर्ण अवस्थाहरूलाई विभिन्न तरिकाहरूमा प्रतिक्रिया गर्छ: कसैलाई चिन्ता र सम्बन्धहरू हटाउन सुरु गर्छ, अन्यहरू आफैमा बन्द छन्, अरू सामान्यतया आफैले क्रमबद्ध गर्न गायब गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। तपाईंको व्यक्तिको व्यवहारको कुनै पनि सिद्धान्त, कसैले यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ।
कुरा गर्न कोसिस गर्नुहोस्, तपाईंको स्थितिको व्याख्या गर्नुहोस्, तपाइँले गल्ती गर्नुभयो भनेर एहसास गर्नुभएपछि तपाईले के गर्नुभयो जस्तो गर्नुभयो। यदि तपाईंले यो सबै आफैंलाई बताउनुभएन भने, व्यक्ति आफैले सबै कुरा संग आउनेछ, र मलाई विश्वास गर्नुहोला, यो उत्तम विकल्प होइन।
खारिज पछि व्यक्तिको विश्वास कसरी पुनर्स्थापित गर्ने?
पहिला, निर्णय गर्नुहोस् कि तपाई साँच्चै आफ्नो सम्बन्ध चाहिन्छ भने, यदि तपाईंले पहिले नै त्यस्तो निर्णायक कदम लिनुभएको छ भने? तपाईं पूर्णतया राम्रो तरिकाले जान्नुहुन्छ कि तपाईंको धोखाधडी साथीको लागि अविश्वसनीय रूपले दुखाइ हुने छ, तर यसले तपाइँलाई पछाडिको कदम लिनबाट रोक्न सकेन। पहिले, आफैलाई बुझ्नुहोस्, तपाईंको व्यवहारको उद्देश्यमा, र त्यसपछि थप कदमहरू लिनुहोस्।
सम्बन्धको फिर्तीको हृदयमा एक ईमानदार कुराकानी हो। केवल सबै केहि भनिएको छ (विवरणमा कुनै मतलब छैन) र तपाईंको दोष स्वीकार गर्दै, तपाईं मा जान सक्नुहुन्छ। तपाईंको भावना, शंका, भावनाहरु बारे हामीलाई भन्नुहोस्। यदि तपाईंलाई दोस्रो मौका दिइएको थियो - आराम नगर्नुहोस्! फर्कन सजिलो छैन।
अब तपाईलाई चिन्ताको डरको कुरा बुझ्न आवश्यक छ, नियन्त्रण अनुमति दिनुहोस्, तपाई जहाँ हुनुहुन्छ र बोल्नु हुन्छ। धेरै अधिक ओभरड नगर्नुहोस्, निर्धक्क दृढता र आक्रमण सहन। व्यक्तिलाई कुरा गर्नुहोस् र भन्नुहोस् कि तपाईं एक साथ हुन सक्नुहुन्छ, यदि केवल तपाईं एकअर्कालाई समर्थन गर्नेछ र बिर्सनु भयो के भयो। यो अपमानित हुनुको लायक छैन, जस्तै आक्रामक रूपले अभिनय गर्ने। यहाँ तपाईंलाई संवेदनशीलता, रणनीति र बुझाइ आवश्यक छ - यस मामला मा त्यहाँ सम्बन्ध फर्कने अवसर हो।
तर यो सम्भव छैन कि सम्बन्ध केहि समय अघि नै जस्तै हुनेछ। तपाईंले राख्नु भएको स्टाम्पको बोझ एक लामो समयको लागि गूंज हुनेछ।
एक जना र केटी बीच प्रेम
प्रेम कसरी बिर्सनु हुन्छ?
कसरी केटालाई सिलाई दिनुहुन्छ?
सम्बन्धमा "मामाको छोरा" - एक मनोवैज्ञानिक चित्र
पुरुषहरु महिलाहरु भन्दा अधिक रोमान्टिक छन्?
सेक्सको बेला एक व्यक्ति कस्तो लाग्छ?
कसलाई मनपर्ने मान्छे लेख्नु हुन्छ?
मानिस कसरी राख्नुहुन्छ?
पहिलो मितिको लागि आदर्श स्थान
मानिसहरू किन प्रेममा पर्छन्?
बालबालिकाको पार्क जैकेट
लङ मिंक फर कोट
हरी चाय कसरी उपयोगी छ?
फर कोट देखि ओटर
नवजात शिशुहरुको लागि जिमनास्टिक्स
कोठरी पेट र पक्षमा स्लिमिङको लागि
मारीह केरी तलाकले निक क्यानन
छोटो कपालको लागि क्यास
फ्रि राजा राजाहरु
चाइङ गम - हानि वा लाभ?
अपार्टमेन्टको आधुनिक अवरोध
अटलांटियन को Subluxation
फर को साथ सर्दियों कोट
पेट मा नवजात राख्नु
महिलाहरु मा एण्ड्रान्सन - के हामी4पुरुष हार्मोन को आवश्यकता छ?
कालचेविना - रोपण र हेरविचार
गर्भवती महिलाहरु को लागि शर्ट्स
दही मा दही को लागि नुस्खा
महिलाहरुको लागि स्टाइलिश वेशभूषा